Colaadda Itoobiya ee Tigray oo lagu sharraxay 500 oo erey | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Colaadda Itoobiya ee Tigray oo lagu sharraxay 500 oo erey
Colaadda Itoobiya ee Tigray oo lagu sharraxay 500 oo erey
Cabsida ayaa sare usii kaceysa isku dhaca daba dheeraaday ee ka socda Itoobiya, iyada oo xukuumada ra’iisul wasaare Abiy ay ku dhawaaqday dagaal ka dhan ah gobolka waqooyiga ee Tigray.
Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa ku dhawaaqay tallaabo militari khudbad uu ka jeediyay telefishanka isagoo jooga Addis Ababa bishii Nofeembar
Dowladda federaalka ee Itoobiya ayaa ku dhawaaqday dagaal ka dhan ah gobolka woqooyi ee Tigray, taasoo horseeday cabsi laga qabo isku dhac daba dheeraada oo ka dhaca waddanka labaad ee ugu dadka badan Afrika.
Gobolka Tigray waa mid ka mid ah 10 dowlad-goboleed oo heer federaal ah oo loo abaabulay qowmiyado ku yaal Itoobiya, oo hoy u ah dadka Tigreega ah oo ah boqolkiiba 6 boqolkiiba dadka Itoobiya oo ka badan
Sannadkii 1975-kii, Jabhadda Xoreynta Dadka Tigray (TPLF) waxay dagaal dheer ku qaadday dawladdii milateriga ahayd ee Derg ee Addis Ababa, taasoo ay aakhirkii xukunka ka tuureen 1991.
Kooxda TPLF ayaa markaa xukumaysay isbahaysiga xukunka haya oo ka kooban afar xisbi oo ku abtirsada qoomiyadaha, ilaa Raiisel wasaare Abiy Ahmed, oo kamid ahaa qowmiyada Oromada, uu xukunka qabtay 2018.
Xisbiyada kale ee isbahaysiga waxay ahaayeen: Oromo Peoples Democratic Organization, the Amhara National Democratic Movement, iyo Southern Ethiopian People’s Democratic Movement.
Tigreega dagaalka adag, millatariga awooda badan ayaa sidoo kale hogaamiyay dagaalkii Ethiopia ay la gashay dalka ay deriska yihiin ee Ereteriya kaas oo kadhacay sanadihii 1998 ilaa 2000 muranka dhul xadka.
Dagaalkan waxaa si rasmi ah loogu dhawaaqay inuu dhammaaday 2018 dadaal nabadeed oo uu sameeyay Abiy, kaasoo ku guuleystay Abaalmarinta Nabadda ee Nobel.
Hantida kooxda TPLF ayaa hoos udhacday tan iyo markii uu xukunka qabtay Abiy 2018 kadib sanado badan oo ay socdeen mudaharaadyo dowlada looga soo horjeeday ayaa ku qasabtay madaxweynihii isaga ka horeeyay ee Hailemariam Desalegn inuu xilka ka dago.
Abiy, hogaamiyaasha Tigreegu waxay ka cawdeen in si cadaalad daro ah loogu bartilmaameedsaday dacwadaha musuqmaasuqa, laga saaray xilalkii ugu sareeyay isla markaana si balaaran loogu cayimay dhibaatooyinka dalka ka jira.
Sanad ka hor, TPLF waxay kabaxday isbahaysigii talada hayay kadib markuu Abiy kubiray Xisbiga Barwaaqada wadanka oo dhan.
Colaada ayaa noqotay mid aad uxun kadib markii Tigray ay qabatay doorashooyinkeeda bishii Sebtember, iyagoo diidanaa xukuumada Abiy oo dib u dhigtay doorashooyinka qaranka sababo la xiriira cudurka faafa ee coronavirus.
Adisababa waxay xukuntay in xukuumada Tigray tahay mid sharci daro ah, taa badalkeedana, Tigray waxay sheegtay inaysan aqoonsanayn maamulka Abiy.
Kadib dowlada federalka waxay hoos udhigtay dhaqaalihii ay siin jirtay gobolka, taas oo kooxda TPLF ay sheegtay inay u dhigantaa ficil dagaal.
Waxa ay ku tilmaamtay kooxda xasaradaha adduunka “lama filaan ah oo la saadaalin karo” ee isku dhaca, Abiy wuxuu sheegay 4tii Nofembar in kooxda TPLF ay ka gudubtay “khad cas” oo ay weerartay saldhig milatari oo federaal ah oo ku yaal Tigray, taas oo ku qasabtay “iska hor imaad militari”.
Kooxda TPLF ayaa Abiy ku eedaynaysa inuu sheekadan qariyey si uu qiil ugu helo hawlgalinta militariga.
Si kastaba ha noqotee, arrimuhu si dhaqso leh ayey ku socdeen, iyadoo Abiy uu sheeganayo in duulimaadyo horay looga fuliyay hantida militariga ee Tigreega uuna ballanqaaday in ka badan.
Khasaaraha ayaa laga soo sheegay labada dhinac laakiin isgaarsiinta oo wali maqan, way adag tahay in la xaqiijiyo koontada labada dhinac ee dhacdooyinka dhulka.
In kasta oo indhaha caalamku ay ku foogan yihiin doorashada Mareykanka, haddana waxaa soo kordhaya qaylo-dhaanta ku saabsan rajada laga qabo dagaal sokeeye oo Itoobiya ka dhaca, kaas oo iska horkeenaya laba ciidan oo awood leh.
Marka la eego Tigray waxay leedahay militari awood badan, oo lagu qiyaaso 250,000 oo askari, dagaal wuxuu noqon karaa mid dheer oo dhiig badan ku daato.
Waxaa jira walaac laga qabo in colaad ka dhacda Itoobiya ay saameyn ku yeelato guud ahaan Geeska Afrika oo awalba jilicsaneyd, oo saameyn ku yeelata dalalka deriska la ah Soomaaliya, Ereteriya, Jabuuti iyo Suudaan.
Previous articleGuul weyn oo laga gaaray tijaabada tallaalka COVID-19 kadib markii la helay
Next articleEthiopia’s Tigray conflict explained in 500 words
Xarunta Diyaaradaha Somalida ka jarato Tigitka ugu Wayn xaafada islii ee...